Laba tilmaame faa'iido deggan | vfxAlert official blog
EMA iyo Stochastic
Qaabkan ganacsiga ee ikhtiyaariyada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah wuxuu muujinayaa faa'iido xasilloon oo ku dhowaad dhammaan qalabyada suuqa Forex waxaana ku jira calaamadaha istiraatiijiga la-qabsiga ee vfxAlert iyo tilmaamayaasha farsamo ee ay tijaabiyeen jiilal badan oo ganacsato ah. Istaraatiijiyaddu waa mid fudud oo la heli karo xitaa kuwa bilowga ah, tilmaamayaasha la adeegsaday ayaa ku jira dhammaan meheradaha ganacsiga ee caanka ah. 'Stochastic oscillator' ayaa siin doona calaamadda ugu horreysa ee isbeddelka isbeddelka, iyo celceliska celceliska dhaqdhaqaaqa oo ah qalab aad u liita ayaa xaqiijin doonta furitaanka ikhtiyaarka.
Nooca : xoqida;
Lammaanaha lacagaha : mid kasta oo leh isbeddel dhexdhexaad ah ama sarreeya;
Jaantusyada: 30 ilbiriqsi - M1;
Xilliga ganacsiga: dhammaan kulammada ganacsiga.
Sida loo ganacsado
Isku hagaaji tusmooyinka nidaamkaaga ganacsiga:
Celceliska Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa (EMA) :
Muddo = 14 (1 EMA);
Muddo = 9 (2 EMA);
Muddo% K = 13;
Muddo% D = 3;
Jilicsanaan = 3;
WAC: Stochastic waxay ka sarreysaa heerka 20 garaafkeeduna wuxuu u jeedaa xagga sare oo shumaca hadda jira wuxuu ka xirmayaa celceliska celceliska dhaqdhaqaaqa.
PUT: Xaaladaha iska soo horjeedda: Stochastic oo ka hooseysa heerka 80, shumaca ayaa ka hooseeya dhexda.
Sida loo furo booska:
Meesha ugu fiican ee laga soo galo waxay noqon doontaa shumaca ugu horreeya ee ka xirma celceliska celceliska dhaqdhaqaaqa iyo si sax ah u dhaqaajiya Stochastic, taas oo ay tahay in fiiro gaar ah loo yeesho - waa inay daruuri ka baxdo in ka badan (80) ama aagag badan (20). Waqtiga jaantuska M1, waad furi kartaa booska shumaca labaad haddii kan hore la seego, laakiin waxaa fiican inaad sugto calaamadaha xiga.
Waqtiga uu dhacayo:
Aan ka yarayn 3-5 shumacyo waqti shaqeynaya
Qaar ka mid ah xoogaa talo ah:
Istaraatiijiyaddan ayaa si xamaasad leh uga faa'iideysanaysa lammaanaha badankood lacagaha, laakiin waxaa fiican in la doorto lacagaha iyadoo la raacayo kalfadhiga ganacsiga ee hadda: EUR / USD iyo GBP / USD ficil ahaan uma guur galayaan fadhiga Aasiya, sidaa darteed xulashooyinka muddada-gaaban waxay kaliya u horseedi doonaan khasaare . Iyo NZD / USD iyo AUD / USD ayaa firfircoon kalfadhiga Aasiya;
Bilaabeyayaashu waa inay furaan ikhtiyaarrada keliya markay gudbaan celceliska garaafka wareegaya! Had iyo jeer waxaad dooneysaa inaad kudhaqaajiso isbeddelka oo dhan dhowr heshiis oo isku xigta, laakiin way fiicantahay inaad sugto calaamadda isgoyska. Weligaa ha furin booska haddii vfxAlert ay muujiso calaamado iska soo horjeed ah oo xoog leh.
Fiiro gaar ah u siideynta wararka aasaasiga ah ee adag iyo tirakoobka! Badanaa ha kugula talin in laga ganacsado xilliyadan, maadaama suuqa aanu degganayn falanqaynta farsamadeeduna hadda sii shaqeynaynin. Laakiin xaqiiqda, haddii ganacsiga wararka uu ku socdo hal daqiiqo, waa suurtagal in la furo ikhtiyaarka jihada wararka iyada oo laga xaqiijinayo istiraatiijiyadda la qabsiga vfxAlert.
Qiyaastii soddon sano ka hor, falanqeeyayaasha suuqa waxaa hareeyay aaminaadda in sicirka sarrifku uu ku tiirsan yahay arrimo badan oo aan macquul ahayn in la saadaaliyo. Si kastaba ha noqotee, nidaaminta khibradaha ganacsiyada sarrifka iyo horumarinta tiknoolajiyada kombuyuutarka ayaa si cad u muujisay suurtagalnimada in la saadaaliyo habdhaqanka qiimaha suuqa. Rajadda soo jiidashada leh ee ah "kasbashada" lacagta badan waxay ku kalliftay xisaabyahanno badan inay soo saaraan habab kala duwan oo lagu saadaaliyo qiimaha. Farsamooyinkan ayaa markii dambe loogu yeeray "tilmaamayaal."
Tirada tilmaamayaasha la yaqaan ayaa muddo dheer tiradoodu ahayd kumanaan. In kasta oo xaqiiqda ah in qaar iyaga ka mid ah lagu yaqaan oo kaliya wareeg cidhiidhi ah oo ku takhasusay, tilmaamayaal badan ayaa si fiican u yaqaan ganacsatada badankood, oo ay ku jiraan kuwa bilowga ah. Mid ka mid ah tilmaamayaasha ugu caansan (oo ay ku jiraan forex) oo si ballaaran loogu adeegsado nidaamyada ganacsiga ayaa ah oscillator isdaba joog ah, oo George Lane bilaabay inuu horumariyo ilaa horaantii 1950-meeyadii. Oscillator-kan, oo caan ku ah George Lane, wuxuu aad ugu eg yahay khadka RSI. Tusmada Awoodda Ehelka (RSI) ee Wells Wilder iyo stochastic waa labada horumarin ee ugu caansan uguna caansan ee oscillator salka,% R Larry Williams, - dhab ahaantii isla stochaastik, kaliya ma ahan mid siman, miisaankuna waa dusha sare hoos.
Marka, stochastic waa mid ka mid ah tilmaamayaasha ugu caansan. Waxaa laga heli karaa dhammaan adeegyada la heli karo oo bixiya sawirro kala duwan, dhammaan baakadaha barnaamijyada ganacsiga wax ka reeban ma jiraan. Hase yeeshe, ganacsato badan, gaar ahaan kuwa bilowga ah, waxay u isticmaalaan si khaldan.